Nrara nye Chukwu Nna raara nye onwa August | Ilblogdellafede
Nraranye nye Nna nke Nna raara nye ọnwa nke August
Paolo Tescione	Edere ya Ọgọstụ 1, 2020 Ọgọstụ 2, 2020
OZI nke AUGUST raara nye NNA CHINEKE
Ekelere m unu
Nna, ana m ekele gị Nna, na mbido ụbọchị ọhụrụ a. Nabata otuto m na ekele maka onyinye nke ndụ na okwukwe. Jiri ike nke Mụọ gị duzie atụmatụ m na omume m: mee ha dịka uche gị si dị. Mee ka m nwere nkụda mmụọ n'agbanyeghị ihe isi ike na ihe ọjọọ niile. Mee ka m chebara mkpa ndị ọzọ echiche. Chebe ezinụlọ m ịhụnanya gị. Ka ọ dịrị.
EKPERE NIILE NYERE nna
Nna m, ahapụrụ m gị: mee m ihe ị ga-achọ. Ihe ọ bụla ị na-eme, ana m ekele gị. Adị m njikere maka ihe ọ bụla, ana m anabata ihe ọ bụla, ọ bụrụhaala na-eme uche gị n’ime m, n’ime ihe niile ị kere eke. O nweghi ihe ozo m choro, Chinekem. Ewere m ya nye gị, Chineke m, jiri ịhụnanya niile nke obi m, n'ihi na ahụrụ m gị n'anya ma ọ dị m mkpa inwe ịhụnanya inye m, itinye onwe m n'aka gị, na ntụkwasị obi na-enweghị ngwụcha, n'ihi na ị bụ Nna m. .
Chineke m, ekwere m, ahụrụ m m n’anya, enwere m olile anya na ahụrụ m gị n’anya, a na m arịọ gị mgbaghara maka ndị ekweghị, atụghị egwu, atụghị anya na enweghị ịhụnanya. Kasị Nsọ Atọ n’Ime Otu, Nna, Ọkpara, na Mụọ Nsọ: A na m asọpụrụ gị nke ukwuu ma na-enye gị ahụ dị oke ọnụ ahịa, Ọbara, Mkpụrụ obi na Chi nke Jizọs Kraịst, nọ ugbu a n’ụlọikwuu niile nke ụwa na mgbapụta maka iwe, emesia na ihe ngosi nke Ya. were onwe ya iwe. Ma maka nghota enweghi ngwụcha nke obi ya dị nsọ na ịrịọ arịrịọ nke obi obi Meri, a na m arịọ gị maka ntụgharị nke ndị mmehie dara ogbenye.
CHINEKE B BLR BL
Chukwu gozie. Onye agọziri agọzi ka aha nsọ Ya bụ. Onye agọziri agọzi ka Jizọs Kraịst bụ ezi Chineke na ezi madụ. Onye agọziri agọzi ka aha Jisos bu onye agọziri agọzi. Onye agọziri agọzi ka Ọbara ya Dị Oké Ọnụ Ahịa. Gọziri agọzi Jesus na Sakrament nke ịchụ-aja. Ngọzi diri Onye Nsọ. Onye agọziri agọzi ka nne nne nke Chukwu, Meri kacha Nsọ. Onye agọziri agọzi ka Nzuzo Ya na Onweghi Eke. Ndi agọziri agọzi ka ebube-ya dị. Aha diri Meri na nne. Benedetto San Giuseppe, di ya kacha dị ọcha. Ndi agọziri agọzi ka Chineke bu na ndi mo-ozi ya na ndi nso Ya.
EKPERE NA-EKPERE MAKA CHINEKE
Chineke m, ọ bụghị naanị gị ka m tụkwasịrị obi, kama ana m atụkwasị naanị gị obi. Ya mere nye m mmụọ nke ịhapụ ịnakwere ihe ndị m na-enweghị ike ịgbanwe. Nyekwa m mmụọ nke ike ịgbanwe ihe ndị m nwere ike ịgbanwe. N'ikpe-azu, nyem Mọ nke amam-ihe, ka m'ghọta ihe-nkem dabere na nkem, ka m'g onlyme kwa uche-Gi nile di nsọ. Amen.
O CHINEKE, KPỌRỌ
Chineke, Onye Okike nke ihe nile: I ji akwa ịma mma dị ka uwe, ehihie na abalị, ị ga-enwe udo nke ụra, ka izu ike ahụ mee ka aka gị ghara ịna-arụ ọrụ, na-ewepụ ike ọgwụgwụ ma na-ewepụ nchegbu. Anyi n’ekele gi maka ubochi a, n’abali; anyị n’ekpe maka ekpere ka ị nyere anyị aka. Ka anyị jiri olu dị ike bụkuo gị abụ abụ; anyị hụkwara gị n'anya siri ike, na-efe ịdị ukwuu gị. Ma mgbe ọchịchịrị nke abalị ejiwo ìhè nke ehihie, ka okwukwe ghara ọchịchịrị ọ bụla, kama na-enye ìhè n'abalị. Ekwela ka nkpuru obi anyi hie n’aju n’aghara gi maka mgbaghara mmehie; okwukwe na echekwa ezumike anyi na nsogbu nke abali. Mee ka anyị ghara ịdị ọcha, mejupụta echiche gị; ekwela ka ajọ onye ahụ mebie udo anyị.
Anata, Onyenwe anyị, nnwere onwe m niile, nabata ebe nchekwa m, ọgụgụ isi m na uche m niile. Enwere m ihe niile m nwere, ihe m nwere. Enyere m onyinye a n’aka gị, ka m hapụ onwe m kpamkpam ka i jiri uche gị mee ihe ị chọrọ. Naanị jiri amara gị nye m ịhụnanya gị, m ga-abụ ọgaranya ma juo ọzọ. Amen.
JEHOVA, MGBE ...
Onye-nwe-ayi Chineke anyị, mgbe ụjọ tụtara anyị, ekwela ka anyị daa mbà! Mgbe ihe anyị mere wutere anyị, ekwela ka anyị mee ihe iwe! Mgbe ị dara, ahapụkwala gị n ’ala! Mgbe anyị na-enweghịzi nghọta ihe ọ bụla ma ike gwụ anyị, ekwela ka anyị laa n'iyi! Ee e, mee ka anyị nwee mmetụta nke ọnụnọ gị na ịhụnanya gị nke ị kwere ndị obi dị umeala ma daa mbà na-atụ egwu okwu gị. Ọ bụ mmadụ niile ka Ọkpara gị ị hụrụ n'anya bịakwutere, ndị a gbahapụrụ agbahapụ: ebe anyị niile bụ, a mụrụ ya n'ụlọ anụ ma nwụọ na obe. Dinwenu, kpọtere anyị niile ma mee ka anyị mụrụ anya iji mara ma kwupụta ya.
CHINEKE nke udo
Chineke nke udo na ihunanya, anyi n’ekpegara Gi ekpere: Onye nwe anyi, Nna nke puru ime ihe nile, Chineke nke di ebighebi, naputa anyi n’ime onwa niile, nyere anyi aka na nsogbu niile, kasie anyi obi na mkpagbu obula. Nye anyị ndidi na nhụjuanya, kwe ka anyị fee gị na ịdị ọcha nke obi, jiri akọ na uche ziri ezi na-abụ abụ, iji mmụọ nsọ gị niile jeere gị ozi. Anyi n’ekele gi, ndi Holy Holy. Anyi na-ekele gi ma n’eto gi kwa ubochi. Anyi na-arịọ Gi nna Abbbi. Anyi n’ekele otuto na ekpere.
CHINEKE NA CHINEKE
Chineke na Onyenwe ihe niile, onye nwere ike na ndụ niile na mkpụrụ obi niile, naanị gị ga - agwọ m: gee ntị n’ekpere nke ihe ọjọọ. Ọ na-eme ka agwọ nke dabere n’obi m nwụọ na-apụ n'anya site na mmụọ nsọ gị. Nye obi m umeala na echiche dabara adaba nye onye mmehie kpebiri imegharị. Ahapụla mkpụrụ obi nke nyefere gị onwe gị kpamkpam, onye kwupụtara okwukwe ya n'ime gị, onye ah ụtara ma kwanyere gị ugwu karịa ụwa niile. Zọputam, Onye-nwe, n’agbanyeghi agwa ojoo ojoo na egbochi igbo ochicho a; mana maka Gị, Onye-nwe, ihe niile kwere omume na nke agaghị ekwe mmadụ.
← Na post gara aga Gara aga post:Usoro ọrụ gọọmentị Vatican na-eme mkpesa maka "nchịkwa, ido onwe onye n'okpuru" maka okpukperechi
Ọzọ Post → Post ozo:Ezi nrara nke taa: uwa kwuru banyere Chukwu